BombCoin စျေး - အွန်လိုင်း BOMB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BombCoin (BOMB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BombCoin (BOMB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BombCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $512 729.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BombCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BombCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BombCoinBOMB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.41BombCoinBOMB သို့ ယူရိုEUR€1.19BombCoinBOMB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.08BombCoinBOMB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.28BombCoinBOMB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr12.55BombCoinBOMB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.8.88BombCoinBOMB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč31.15BombCoinBOMB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł5.24BombCoinBOMB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.86BombCoinBOMB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.97BombCoinBOMB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$31.25BombCoinBOMB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$10.91BombCoinBOMB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$7.55BombCoinBOMB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹105.35BombCoinBOMB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.237.6BombCoinBOMB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.93BombCoinBOMB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.15BombCoinBOMB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿43.75BombCoinBOMB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥9.78BombCoinBOMB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥150.23BombCoinBOMB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1667.6BombCoinBOMB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦545.25BombCoinBOMB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽103.13BombCoinBOMB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴38.67
BombCoinBOMB သို့ BitcoinBTC0.000122 BombCoinBOMB သို့ EthereumETH0.00367 BombCoinBOMB သို့ LitecoinLTC0.0259 BombCoinBOMB သို့ DigitalCashDASH0.0155 BombCoinBOMB သို့ MoneroXMR0.0158 BombCoinBOMB သို့ NxtNXT109.78 BombCoinBOMB သို့ Ethereum ClassicETC0.207 BombCoinBOMB သို့ DogecoinDOGE406.16 BombCoinBOMB သို့ ZCashZEC0.0171 BombCoinBOMB သို့ BitsharesBTS43.36 BombCoinBOMB သို့ DigiByteDGB45.03 BombCoinBOMB သို့ RippleXRP5 BombCoinBOMB သို့ BitcoinDarkBTCD0.0485 BombCoinBOMB သို့ PeerCoinPPC4.67 BombCoinBOMB သို့ CraigsCoinCRAIG641.3 BombCoinBOMB သို့ BitstakeXBS60.02 BombCoinBOMB သို့ PayCoinXPY24.57 BombCoinBOMB သို့ ProsperCoinPRC176.6 BombCoinBOMB သို့ YbCoinYBC0.000756 BombCoinBOMB သို့ DarkKushDANK451.69 BombCoinBOMB သို့ GiveCoinGIVE3048.47 BombCoinBOMB သို့ KoboCoinKOBO320.66 BombCoinBOMB သို့ DarkTokenDT1.3 BombCoinBOMB သို့ CETUS CoinCETI4065.2
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 08:15:03 +0000.